सबैलाई रुवाउने किस्मीको जीवनको बन्यो यस्तो वास्तबिक गीत मन थामेर हेर्नुस ? – Ramailo Sandesh
‘कृशमी जसलाई हामीले मनिषा भनेर बोलाउने गर्थेउ उनी आज भन्दा ७ बर्ष अगाडी अर्थात् २०१५ मा हाम्रो एकेडेमीमा भर्ना हुन आइपुगेकी थिइन् र मलाई अझैं पनि सम्झना छ उनी स्याङ्जाको एउटा विकट गाँउ बाट उनकै एयर होस्टेस सम्बन्धी कुनै पनि ज्ञान थिएन त्यति बेला उसलाई। उनी आज भन्दा सात वर्ष अगाडी एयर होस्टेसको तालिम लिन पोखराको एउटा एकेडेमीमा आएकी रहेछिन। किस्मीले मर्नुभन्दा अघि आमा र हजुर आमासंगै रमाइलो गरेको यी टिकटक भिडियो हेर्दा कसको मन नरोला र ?
सबैलाई रुवाउने किस्मीको जीवनको बन्यो यस्तो वास्तबिक गीत मन थामेर हेर्नुस ? यो दृश्यले मुटु छियाछिय पुरा जानकारीको लागि भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।